Homeလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gaziantep xnumx.etap ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များနှင့်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
06 / 12 / 2012 Levent Ozen လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အလင်းကိုရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (LRT), အလင်းကိုရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ် (LRT) လေလံ, ခေါင်းစီးသတင်း, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, တည်ဆောက်နေလေလံ 0
Gaziantep xnumx.etap İbrahimliဧရိယာရထားပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလြှပျစစျမီးနူးညံ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ်34734 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 180823
က) လိပ်စာ: Incilipinar Mah ။ အမှတ်3CAD ။427090 İncilipınarŞEHİTKAMİL / GAZIANTEP
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3422111200 - 3422111293
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ihale@gaziantep-bld.gov.t
စာချုပ်၏သဘောသဘာဝ, နုစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပါရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးသတ်မှတ်ချက်များအနေဖြင့်ဝင်ရောက်တည်ရှိသောအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကို (အီလက်ထရောနစ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးပလက်ဖောင်း) ကိုရည်မှတ် ECAP နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ။
ခ) Place: Gaziantep İbrahimliဧရိယာ
ဂ) အစအဦးအလုပ်လုပ်: အ7ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ.
အဆိုပါပေးပို့တည်နေရာ (သုံးရာ) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှ 300: ဃ) အချိန်လုပ်ဆောင်ပါ။
က) Place: Gaziantep မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 09.01.2013 - 10: 00
4.1 ။ အခြေအနေများနှင့်တင်ဒါတွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်စာရွက်စာတမ်းများ:
4.1.1 ။ ဥပဒေပြုကုန်သွယ်ရေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် / သို့မဟုတ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသို့မဟုတ် Tradesmen နှင့် Artisan ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်လက်မှတ်ကြောင့်။
4.1.1.1 ။ စီးပွားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်စက်မှုဇုန်အခန်းများအဖြစ်သို့မဟုတ်အခန်းကနေဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းထဲကထံမှလက်သမားနှင့်သိမ်းသွားလေ၏ထံမှမှတ်ပုံတင်အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးသည်, လေလံရက်စွဲ၏ပထမဦးဆုံးကြေငြာချက်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လည်းမရှိလြှငျ, စာရွက်စာတမ်း၏မှတ်ပုံတင်ညွှန်ပြ,
4.1.1.2 ။ ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေပြဌာန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်သည်ကြီးများထံမှမှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည့်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အမှု၌, နုနေ့စွဲ၏ပထမဦးဆုံးကြေငြာချက်၏တစ်နှစ်, ဥပဒေကိုယ်ထည်၏မှတ်ပုံတင်ညွှန်ပြ,
4.1.2 ။ လေလံဆွဲရန်အခွင့်အာဏာဖေါ်ပြခြင်းလက်မှတကြေညာစာတမ်းသို့မဟုတ် signature မြို့ပတ်။
4.1.2.1 ။ တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, တစ်ဦး notarized လက်မှတ်ကြေညာချက်လည်းမရှိပါ။
4.1.2.2 ။ တရားဝင်လူတစ်ဦး၏အမှု၌, entity ၏မိတ်ဖက်နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနကုန်သွယ်ရေး Registry ကိုပြန်တမ်းပြသထားတယ်ဖျောတာဝန်ရှိသူများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တရားဝင် entity ၎င်း၏ဆက်စပ်မှု, အဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်တည်ထောင်သူသည်နှင့်အညီ, ဤအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်အားလုံးတစ်ကုန်သွယ်ရေး Registry ကိုပြန်တမ်းကုန်သွယ်ရေး Registry ကိုပြန်တမ်းသို့မဟုတ်ဤအချက်အလက်များ၏အားလုံးပြသရန်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် အခွင့်အာဏာလက်မှတ်ပေါင်း, ဥပဒေရေးရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူစာရွက်စာတမ်းများ notarized
4.1.3 ။ Form ကိုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Specification ဖို့အဆိုပြုချက်ကိုစာအကြောင်းအရာ။
4.1.4 ။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်လေလံနှောင်ကြိုး၏အကြောင်းအရာ။
အလုပ်ကန်ထရိုက်မှဘာသာရပ်အုပ်ချုပ်ရေးအလုပ် xnumxihal ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ။ သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအပေါငျးတို့သအလုပ်ကန်ထရိုက်ရန်။ သူတို့အဆိုပြုချက်သီးနှံများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက်ကန်ထရိုက်မှဘာသာရပ်တင်ဒါဖို့ရည်ရွယ်ထားသောအရာတို့ကိုလေလံစာရင်း။
4.1.6 သူတို့ပိုရှယ်ယာ၏ထက်ဝက်ထက်မိတ်ဖက် entity မှဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးခွငျးအားဖွငျ့ပထမဦးဆုံးကြေငြာချက်ရက်စွဲပြီးနောက်ကျင်းပခဲ့သောကုန်သွယ်မှု registry ကိုရုံးများသို့မဟုတ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအများပြည်သူစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်အများပြည်သူစာရင်းကိုင်အတွင်းခန်းထဲမှာ / ကုန်သွယ်၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအခန်းများပိုင်လျှင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသရုပ်ပြတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်း , နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစ. နောက်ပြန်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အတိုင်းဤအခြေအနေကြောင့်ထိန်းသိမ်းဖေါ်ပြခြင်းစာရွက်စာတမ်းများ။
4.2 ။ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စံစီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအရည်အချင်းများဤစာရွက်စာတမ်းများကြောင်း:
အဆိုပါလေလံများကသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရည်ညွှန်းအက္ခရာများကိုညွှန်းဘဏ်များသို့မဟုတ် Non-ငွေသားချေးငွေသို့မဟုတ်ဘဏ်သိုက်မကန့်သတ်ရာတွင်အသုံးပြုငွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား၏ 10% ထက်မနည်းရပါလိမ့်မည်
4.2.2 ။ ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်၏တစ်နှစ်ရှေ့ယခုနှစ်အကုန်တွင်ဝယ်ယူရေးသို့မဟုတ်ညီမျှသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်ဆင်းသည်:
က) လက်ရှိအချိုးအစား (လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှု / လက်ရှိ liabilities) ကအနည်းဆုံး 0,75 သူဖြစ်ရမည်,
ခ) Equity အချိုး (ရှယ်ယာ / စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု) ကအနည်းဆုံး 0,15 ရှိသည်,
ဂ) 0,50 ထက်လျော့နည်းဖြစ်က Short-term ဘဏ်အကြွေးရှယ်ယာအချိုး, အရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက်နှင့်ဤသုံးပါးစံဖြစ်ကြသည်။
ယခင်နှစျတှငျအထကျဖျောပွထားသညျ့စံမပေးနိုငျသောသူတို့ကို, သုံးနှစ်နောက်ဆုံးမှတက်ယခုနှစ်စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများငွေကြေးပမာဏ၏ပျမ်းမျှခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်လုံလောက်မှုစံများကိုပေးအပ်သည်။
နုသို့မဟုတ်နူးညံ့သောနောက်ဆုံးနေ့ရာနှစ်နေ့စွဲ၏ပထမလေးလမှာယခင်တစ်နှစ်လက်မှတ်များပေးသောသူတို့အားနှစ်ခုသည်ယခင်နှစ်ပေါင်းအဘို့မိမိတို့လက်မှတ်များတင်ပြစေနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားစာရွက်စာတမ်းများ, နှစ်ခုသည်ယခင်နှစ်ပေါင်းအတူအရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက်မပေးနိုငျသောသူတို့ကိုစဉ်အခါ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများလေးပါးကိုယခင်နှစ်ပေါင်းသုံးပေးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများငွေကြေးပမာဏ၏ပျမ်းမျှခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်လုံလောက်မှုစံများကိုပေးအပ်သည်။
4.2.3 ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသံအတိုးအကျယ်ကိုညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများ:
ကတိကဝတ်အောက်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်၏သဘောပေါက်၏အစိတ်အပိုင်းများ၏လေလံရဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကကမ်းလှမ်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာပမာဏများအတွက်ပြီးစီးခဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စျေးနှုန်း၏ 25% ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်စျေးနှုန်း၏ 15% ထက်ကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။ ထောက်ပံ့နှင့်စံနှုန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းဒါကပူဇျောသက်ကာစာရွက်စာတမ်းလုံလောက်သောစဉ်းစားစံ၏တစုံတယောက်သောသူသည်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိကြလိမ့်မည်။
နုရာအတွက်နူးညံ့သောထိုနှစ်တွင်ရှေ့တော်၌ထိုနှစ်တွင်မှစတင်ကနောက်ဆုံးခြောက်လနှစ်ဆက်တိုက်အထိသူတို့၏စာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ရသောအတွက်တစ်နှစ်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းဤစံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်သူများသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှစ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများငွေကြေးပမာဏ၏ပျမ်းမျှခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်လုံလောက်မှုစံများကိုပေးအပ်သည်။
နုသို့မဟုတ်နူးညံ့သောနောက်ဆုံးနေ့ရာနှစ်နေ့စွဲ၏ပထမလေးလ, နုရှေ့နှစ်တွင်တဦးဖြစ်စဉ်းစားသောယခင်နှစ်များအတွက်ဝင်ငွေ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုတင်ပြသူမြား၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ခုသည်ယခင်နှစ်များတွင်။ စာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်, နှစ်ခုသည်ယခင်နှစ်ပေါင်းအတိုင်းဤဝင်ငွေကြေညာချက်၏မရှိခြင်း၏အမှု၌, ဝင်ငွေကြေညာချက်သည်ယခင်နှစ်ကအဖြစ်လက်ခံခံရဖို့အထိနောက်ဆုံးခြောက်နှစ်အတွင်းတင်ဒါအကဲဖြတ်မည်, ဖန်ဆင်းခဲ့တစ်နှစ်တည်လိမ့်ရန်ငွေကြေးပမာဏ၏ပျမ်းမျှအတူအရည်အချင်းများ၏တင်ပြသည့်နှစ်ပေါင်းများအတွက်ဝင်ငွေကြေညာချက်အရာအမှု၌, တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
4.3 ။ ဤစာရွက်စာတမ်းများပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စံနှုန်းများ:
4.3.1 ။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံစာရွက်စာတမ်းများ:
အဆိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိကတိကဝတ်များ 100% နှုန်းထက်မနည်းများအတွက်စာချုပ်အလုပ်သို့မဟုတ်အလားတူအလုပ်၏ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဖေါ်ပြခြင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်တဆယ်ငါးနှစ်အတွင်းစျေးနှုန်းင်တစ်ဦးစာချုပ်အဆိုပြု,
အလားတူအလုပ်လေလံပွဲအင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာကျင့်သောအကျင့်နှင့်ညီမျှထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဆင်တူအစိတ်အပိုင်းများအလုပ်လုပ်တယ်ပါလိမ့်မည်အဖြစ် xnumx.b စဉ်းစားလိမ့်မည်:
4.4.1 ။ အမှုတော်တို့ကိုဒီတင်ဒါအလားတူအလုပ်အဖြစ်လက်ခံလိမ့်မည်:
အမှုအရာအလားတူအကျင့်ကိုကျင့်၏အကြောင်းကြားစာထဲမှာလယ်ပြင်၌အတှေ့အကွုံအလုပ်မလုပ်အောင် / VI ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ Group မှစီးပွားရေး, D ကို / V ကို Group မှအလုပ်အကိုင်များနှင့် E / ငါ Group မှပါဝင်သောအလုပ်လုပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်အလားတူအလုပ်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
4.4.2 ။ အလားတူအလုပ်အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်ဗိသုကာဌာနနှင့်ညီမျှစဉ်းစားလိမ့်မည်:
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာနှင့် / သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ
7.1 ။ စာရွက်စာတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် 500 ကွိုးစားပါ (တူရကီလိုင်ရာ) မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဆိုပါတင်ဒါမှာပိုက်ဆံ Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဝယ်ယူမှုဦးစီးဌာနပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဌာနခွဲချိန်းအဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။
7.2 ။ နုစာရွက်စာတမ်းဝယ်ယူရန်တင်ဒါအတွက်လေလံဆွဲပါလိမ့်မယ်သူများသည်။
လေလံ, ထိုကဲ့သို့သောချိန်းအဖြစ် Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဝယ်ယူမှုဦးစီးဌာနပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကန်ထရိုက်၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်သည်အထိတင်ဒါလိပ်စာ၏ညွှန်ကြားမှု, တူညီတဲ့လိပ်စာမှတင်သွင်းသို့မဟုတ်မေတ္တာရပ်ခံမှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ပြန်လာလက်ခံရရှိကနေတဆင့်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း။
လေလံလေလံ, ဒီထုတ်ကုန်၏ယူနစ်စျေးနှုန်းများအတွက်စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုလေလံကျော်ယူနစ်စျေးနှုန်း၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်အဆိုပြုထားအလုပ်ပစ္စည်းများကိုပမာဏအားဖြင့်အသီးအသီးအလုပျကို item ။ လေလံရလဒ်များကို, ယူနစ်-စျေးနှုန်းစာချုပ်နုအပေါ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်။
လေလံသူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စျေးနှုန်း၏မလျော့နည်း3ထက်% ဆုံးဖြတ်ခံရဖို့ပမာဏကိုအတွက်လေလံနှောင်ကြိုးတင်ပြရမည်။
နူးညံ့သော (တရာနှစ်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ကာလ၏နေ့စွဲကနေလေလံ၏တရားဝင်မှုကာလ, 120 ။
နုန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးများ (N) တို့အတွက်လျှောက်ထားခံရဖို့မြှောက်ဖော်ကိန်း: 1,20
မှတ်ချက်: ငါအထက်ပါစနစ်၏အားလုံး load နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများ 40MB နူးညံ့။ အပြည့်အဝကိုနူးညံ့စာရွက်စာတမ်းကြည့်ဖို့ / ဝယ်ယူအုပ်ချုပ်ရေးကိုရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါသည်။
p style = "text-align: စင်တာ;">
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလြှပျစစျမီးတင်ဒါလေလံစုဆောင်းခဲ့ကြသည် Gaziantep xnumx.etap İbrahimliဧရိယာရထား (အထူးအစီရင်ခံစာ) 09 / 01 / 2013 4734 အားဖြင့် Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 19 အပိုဒ် Gaziantep xnumx.etap İbrahimliဧရိယာရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်သည်နှင့်အညီပွင့်လင်းနူးညံ့သောအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုကိုချီးမြှင့်ခံရခဲ့ပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနူးညံ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လေလံယနေ့စုဆောင်းခဲ့ကြရသောပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်။ , အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း3စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်အကြောင်းကိုကုန်ကျသောနူးညံ့သောကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ပေးတော်မူ၏။ 58.085.000 ။ Comsa - £ 1 45.791.383,12 ။ Gülermak - £247.263.382,58 ။ အဆောက်အဦးမြစင်တာ - 3
Gaziantep4အဆင့်ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား) 02 / 01 / 2014 Gaziantep4အဆင့်ရထားစနစ်ဆောက်လုပ်ရေးပြီးတော့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် GAZIANTEP စည်ပင်သာယာ4အဆင့်ရထားစနစ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေများ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်အားဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 194688 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Incilipinar Mah ။ အမှတ်3CAD ။427090 İncilipınarŞEHİTKAMİL / GAZIANTEP ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3422111200 - 3422111293 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: နုစာရွက်စာတမ်း၏ ihale@gaziantep-bld.gov.t CA) ကအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: အ https: //ekap.kik.gov.t တစ်ဦး) ၏နူးညံ့မှ / ECAP / 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gaziantep ရထားစနစ်3။ အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်၏ဆောက်လုပ်ရေး 10 / 01 / 2013 ရထားလမ်းစနစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရေးဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ Gaziantep ရေနှင့် Sewerage အုပ်ချုပ်ရေး (vas) Gaziantep ရထားစနစ်3၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ အခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ခြင်းအဆင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ဆောက်လုပ်ရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2012 / 194163 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: İncilipınar Mah ။ အမှတ်4CAD ။ 27090 ŞEHİTKAMİL / GAZIANTEP ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3422111300 - 3422318833 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2: ihaleler@gaski.gov.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် က) သဘာဝတရား -BIDDING ဘာသာရပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: xnumx.etap ၏ Gaziantep ရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး * 21 / 03 / 2013 Gaziantep GAZIANTEP ရေနှင့်အပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင် (GASKİ) ရထားလမ်းစနစ်3အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး xnumx.etap ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်။ တည်ဆောက်နေဇာတ်စင်နောက်ခံဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ်34734 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2013 26303-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: İncilipınar Mah ။ အမှတ် 1 CAD ။4ŞEHİTKAMİL / GAZIANTEP ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 27090 - 3422111300 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 3422318833: ihaleler@gaski.gov.t သုံးခုသည်) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် -BIDDING ဘာသာရပ်လုပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ:2။ Karata အဆင့်ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 01 / 04 / 2011 ဇာတ်စင် Karata ရထားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်မီးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဇာတ်စင် Karata ရထားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်မီးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2011 / 31910 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: İncilipınar Mah ။ အမှတ်3CAD ။ အမှတ်4Şehitkamil / Gaziantep ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3422111200 - 3422111293 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: ihale@gaziantep-bld.gov.t (ရှိပါက) သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦး) ၏ 2-တင်ဒါဘာသာရပ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် သဘောသဘာဝ, အမျိုးအစားနှင့် ...
Gaziantep - လက်ပိုအရှိန်ရထားလိုင်းလုပ်ဖို့
TCDD မြင့်တက်ရုံးစာမေးပွဲတွင်ဒီဇင်ဘာလ 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလြှပျစစျမီးတင်ဒါလေလံစုဆောင်းခဲ့ကြသည် Gaziantep xnumx.etap İbrahimliဧရိယာရထား (အထူးအစီရင်ခံစာ)
Gaziantep4အဆင့်ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gaziantep ရထားစနစ်3။ အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းအဆင့်၏ဆောက်လုပ်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: xnumx.etap ၏ Gaziantep ရထားအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေး *
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ:2။ Karata အဆင့်ရထားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်
Gaziantep xnumx.etap ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ရထားလမ်းစနစ်ကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခု၏လြှပျစစျမီးနု Comsa လုပ် SA အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အနိုင်ရ
ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်ရထားလမ်းစနစ်ကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အနူးညံ့၏ Gaziantep ရထားစနစ်စီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးလြှပျစစျမီး၏ရောင်းအားပြန်လည်စတင်
အဆိုပါရထားလမ်းစနစ်ကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခု၏ Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရထားစနစ်စီမံကိန်းနှင့် AMSA လြှပျစစျမီးအဆိုပါ Co. , SE ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိ